Abalandeli beZombie: Abafileyo Bahamba Emhlabeni Wokukhangisa Okunomthelela | Martech Zone
Uhlangabezana nephrofayili yemidiya yezenhlalo enesibalo sabalandeli esingaphezulu kwesilinganiso, izinkulungwane zokuthandwa, kanye nolwazi lwangaphambilini lobambiswano lomkhiqizo - Iqhinga noma into emnandi?
Ngenombolo ye imikhankaso yokukhangisa enomthelela Ukuqhubeka nokukhuphuka, akuvamile kakhulu ukuthi imikhiqizo ibe isisulu senkohliso yama-akhawunti anjalo enabalandeli mbumbulu nezethameli ezingekho emthethweni.
Ngokusho the Ithimba Lezentengiso Elinomthelela:
Ukuthengiswa kwe-Influencer isethwe ukuthi ikhule icishe ibe ngu- $ 9.7B ngo-2020.
300% ngaphezulu Abathonya abancane zisetshenziswa amafemu amakhulu kunango-2016.
Cishe i-90% yayo yonke imikhankaso yokuthonya ifaka phakathi Instagram njengengxenye yomxube wokumaketha.
Ukukhwabanisa kwabathonya kukhathazeka ngokwandayo kwabaphendulayo nabangaphezu kuka-2/3 wabaphenduli abakubonile lokho.
Lokho akusho ukuthi bonke abathonya abakhulu bangena kulesi sigaba. Eqinisweni, ama-apula amabi ayingcosana futhi aqhelelene kakhulu futhi adlula kakhulu lawo aqotho futhi athembeke ngokuphelele.
Kodwa-ke, kubalulekile ukuqonda kahle ukuthi ungamkhetha kanjani umthelela onazo zonke izinhloso ezinhle kakhulu wena nomkhiqizo wakho.
Manje, asizami ukwethusa noma ngubani kude nokukhangisa okunomthelela. Ngokuphambene nalokho empeleni. Futhi ukucela usizo lwenhlangano yokuthengisa enomthelela kungasiza abakhiqizi ukuthi bathole umuntu onethonya ngezithameli ezithembekile ngokweqiniso nezizosiza ekwenzeni inzuzo enhle ekutshalweni kwezimali.
Imithombo yezokuxhumana ingenye yezindlela zokuxhumana ezihlangabezane nokukhula okungenakulinganiswa ezinyangeni ezedlule. Noma imuphi umakethi angabona ukuthi umsebenzi wokuphromotha kungxenyekazi eku-inthanethi udinga ukwakha ingxenye yecebo lomkhiqizo eliya phambili. Futhi ukubambisana okuthonya kungenye yezindlela ezisebenza kakhulu nezingokwemvelo ongazisebenzisa ukwenza lokho kanye.
U-Amelia Neate, iMenenja ePhakeme Umenzi Wokuqhathanisa
U-Amelia akalungile. Eqinisweni, ukumaketha okuthonya kuyindlela esheshayo yokuthola amakhasimende online, nge 22% wabamakethi futhi bakubiza ngokuthi kuyonga kakhulu.
Futhi ngenxa yalokho, 67% Abakhangisi bezinhlobo zemikhiqizo ezinhlobonhlobo zemikhakha balungiselela ukwandisa imali yabo yokuthengisa abanomthelela ezinyangeni eziyi-12 ezizayo.
Kepha, njengoba imikhiqizo iqala ukukhulisa umsebenzi onomthelela, u-Amelia uchaza ukuthi ungawusebenzisa kanjani umkhankaso wokukhangisa othonya, uqinisekise ukuthi usebenza ngempumelelo ngangokunokwenzeka.
Ukwesaba Komlandeli Wenkohliso
Abalandeli bamanga nemikhondo efile iza ngezindlela eziningi. Ngokudume kakhulu, abalandeli abathengiwe bangezinye zezinto ezivame kakhulu, lapho abantu beqa umsebenzi onzima obandakanyekayo ekukhuphukeni kwezinkundla zokuxhumana, futhi esikhundleni salokho, bakhokhele abalandeli mbumbulu ukuze benze i-akhawunti yabo ibukeke inkulu kunalokho eyiyo.
Yize lokhu kuba yinto elahlwa yibo bobabili abasebenzisi nemikhiqizo, ngaphandle kwalapho kutholakala, kungaba nzima ukuhlukanisa isibalo sangempela sabalandeli esiphakeme kunaleso esiyimbumbulu.
Olunye uhlobo lomlandeli mbumbulu yi-akhawunti ebingasebenzi isikhathi eside, noma ngabe kungenxa yokuthi umuntu ukhohliwe ngayo, akasafuni ukuyisebenzisa kepha akayisusanga iphrofayili, noma okunye.
Kepha noma ngabe yisiphi isizathu, i-akhawunti engasebenzi ingaba nomthelela omubi kuzilinganiso zokubandakanya.
Iqokomisa ukuthi lokhu kungaba yingozi kangakanani kumikhiqizo, isifundo sithole ukuthi kungaba khona abaningi 95 abayizigidi ezingu bot bezibiza ngabalandeli mbumbulu ku-Instagram kuphela, kubiza amabhizinisi ama- $ 1.3 billion emikhondweni nasekulahlekelweni okushonile.
Ukulwa nemiphumela emibi lokhu okunayo kuhlobo lomkhiqizo, ukusebenzisa ubuchwepheshe be-ejensi yokuthengisa enomthelela kungasiza ukubeka izingqondo ekuphumuleni futhi kuqinisekise ukuthi umkhankaso uzofinyelela izinkulungwane, uma kungenjalo izigidi zabalandeli abazibophezele kakhulu.
Kube khona amacala amaningi kule minyaka edlule lapho abantu abanesimo sethonya batholakale benecala lokuthenga abalandeli mbumbulu ukwenza ngcono imibono yamandla nokuvelela kwabo ezisekelweni.
Isibonelo, ama-Bake Off's UPaul Hollywood wazithola esehlazweni lomlandeli mbumbulu ngesikhathi ethatha ikhefu kuTwitter ngemuva kokuthi isibalo sabalandeli bakhe sehle ngemuva kwenkundla yokuxhumana nabantu esusa ama-akhawunti mbumbulu emsamo.
Ezinye izifundo ziveza ukuphakama okumangazayo amaphesenti omlandeli mbumbulu yabathonya abadumile, abanjengoKourtney Kardashian nabanye abagqugquzeli bezokuxhumana abahlukahlukene.
Yinombolo kuphela ekugcineni kosuku, akunjalo? Kepha maqondana nemikhiqizo, lokhu kufanele kusethe izinsimbi zama-alamu kukhala. Lapho umkhiqizo ukhipha umkhankaso wokugqugquzela, bakwenza lokho benombono wokuthi umkhiqizo wabo uzofinyelela izithameli ezibanzi - nalabo abazibophezele kulokho. Abathonya bangakhokhisa izizumbulu zemali ngeposi elilodwa nje, ngakho-ke imikhiqizo idinga ukuqiniseka ukuthi imbuyiselo, ngokwesibonelo, ekufinyeleleni noma ekuvezweni abazokuthola, inkulu ngokwanele ukufakazela ukusetshenziswa kwemali.
U-Amelia Neate, iMenenja ePhakeme kunhlangano yezentengiso ethonya umhlaba wonke, Umenzi Wokuqhathanisa
Ngakho-ke, Yini Okufanele Yenziwe Brands?
U-Amelia uchaza ukuthi kunezinto eziningi okufanele zibhekwe lapho usebenzisana nomgqugquzeli.
ukuzibophezela - Esikhundleni sokugxila ezibalweni zabalandeli, beka ukubaluleka okukhulu kuzilinganiso zokubandakanya. Ngenkathi usayizi wababukeli umkhankaso wakho ofinyelela kuwo ungaba mncane, labo abafinyelela kubo kungenzeka basebenzisane nawo. Futhi yileyondlela oyothola ngayo imiphumela futhi uhlangabezane nezinhloso zakho zokumaketha.
Ama-Micro-Influencers - Abathonya abancane bavame ukuba nezilinganiso zokuzibandakanya eziphakeme. Yize zingezikhulu, izithameli zazo ngokuvamile ziyasebenzisana futhi ziyiqiniso ngakho-ke, zingabaluleka kakhulu kumikhiqizo.
Ukuthandwa - Ngenkathi kukhona amathuluzi laphaya wokuhlola izilinganiso zokuzibandakanya, ungaqhuba ucwaningo lwakho ngokuqhathanisa ukubalwa komlandeli kunani lokuthandwa okutholwa yimibhalo yamaphrofayela.
Amazwana - Uma ungaqiniseki ngokuba semthethweni komthonya, ukuphawula kungenye into ekhulumayo. Bheka ukuthi, okokuqala, ingabe bathola ukuphawula futhi okwesibili, ukuthi ngabe kukhona amaphethini noma umsebenzi ofana nogaxekile kuwo. Isibonelo, imibono evela kulokho okubonakala kungabasebenzisi abahlukile, kepha bonke abafunda ngokufanayo, kungenzeka babe ngamabhoti.
Ngenye indlela, ungacela usizo lomenzeli wemikhankaso yakho. Kanye namathuluzi nokuqonda kwemboni, ama-ejensi anokufinyelela kunani elikhulu lemininingwane yokusiza ama-brand ngempumelelo yemikhankaso yawo. Ama-ejensi wokumaketha athonya ngokuvamile akha futhi akhulise ubudlelwano obuqinile nabathonya, abaziyo ukuthi banokulandelwa okuyiqiniso nezilinganiso zokubandakanya.
Ngakho-ke, ngaphambi kokuthi ungqongqoze eminyangweni yamaphrofayili wezokuxhumana ukuze uthole usizo ngomkhankaso wakho olandelayo wokugqugquzela, qiniseka ukuthi utshalomali lwakho luzohlangatshezwa ngokuphathwa hhayi ngamasu. Ukuthola eminye imininingwane:
Vakashela i-Influencer Matchmaker
Tags: U-Amelia neateukuthonya ukuzibandakanyaukuthonya ukukhwabanisaukumaketha kwamathonyaumenzi womlingisi onethonyaUKourtney kardashianukuthonya okukhuluukuthonya okuncanePaul hollywood